I-Everest: izici, imvelaphi, isimo sezulu, izimbali nezilwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma sikhuluma ngenani eliphakeme kunazo zonke emhlabeni kulula ukukhumbula igama lika Everest. Yindawo engasebenzeli nje kuphela ukubhekisela endaweni ephakeme kakhulu emhlabeni, kepha futhi njengendawo yokuhlangana neyokuzijabulisa yabo bonke labo abagibeli nabathandi bemvelo. Uhla lonke lwezintaba lapho kutholakala khona i-Everest lubizwa nge- Himalaya. Ubuhle bunamagama ahlukene kuye ngendawo esikuyo. KwabaseNepal igama elithi Sagarmāthā, amaShayina alazi njengoZhūmùlǎngmǎ Fēng kanti abaseTibet bawubiza ngokuthi yiChomolungma.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, imvelaphi nokubaluleka kwe-Everest.
2 Isimo sezulu se-Everest
3 Ukwakhiwa kwe-Everest
4 Izimbali nezilwane
Yize izibalo zibekiwe, kukhona ukudideka maqondana nokuphakama kwangempela kwalesi siqongo. Okuyiqiniso nokwaziwa ngokuqinisekile ukuthi yindawo ephakeme kakhulu emhlabeni wethu. Kodwa-ke, akuyona intaba enkulu kunazo zonke noma ephakeme kunazo zonke, ngoba singabheka izintaba zolwandle ngokuphakama kwazo. Isibonelo, iMauna Kea yintaba-mlilo lapho ilinganisa ngaphezu kwamamitha ayi-10000 XNUMX ukuphakama ukusuka kusisekelo sayo futhi isendaweni yolwandle.
Njengoba sishilo ngaphambili, isiqongo se-Everest siyingxenye yezintaba zaseHimalaya futhi siseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, phakathi kwezwekazi laseNdiya kanye ne-Asia yonke. Iya ebangeni elingamamitha ayi-8.850 ngaphezu kogu lolwandle nezembozo indawo elinganiselwa kumakhilomitha-skwele angama-594,400. Kunabantu abafana nalolu hambo lwezintaba kuya ku-piramidi enobuso obungu-3. Umoya osengxenyeni ephakeme kakhulu yalezi zintaba untula umoya-mpilo ngoba usemikhawulweni yetroposphere. Ngaphezu kwalokho, kuba yinselele kubo bonke abagibeli bezintaba, ngoba le ndawo ivame ukushaywa yimimoya enamandla futhi ihambisane nesimo sezulu esibandayo.
Le ngqungquthela ayilutho nje lwesiqongo samatshe esizungezwe iqhwa elinzima kakhulu ebelizungezwe olunye ungqimba lweqhwa olungancishiswa noma lukhuphuke eminyakeni edlule. Konke kuncike emazingeni okushisa nasemjikelezweni weqhwa. Uma izinga lokuqongelela iqhwa likhulu kunalelo lokuhuzuka, inguzunga yeqhwa izoqhubeka nokukhula. Siyazi ukuthi ngenyanga kaSepthemba isiqongo siphakeme kakhulu kunangenyanga kaMeyi. Lokhu kufana nalokho esikushilo ngomjikelezo weqhwa.
Isimo sezulu se-Everest
Izinga lokushisa nakho kuyinto engaguquguquki. Ngokuvamile kuyehluka ngezikhathi zonyaka. Ekuqaleni konyaka bangafinyelela ukufinyelela emazingeni okushisa angama -36 degrees, kanti ehlobo kufinyelela ku -19 degrees.
Ngesikhathi semvula, esiphakathi kwezinyanga zikaJuni kuya kuSepthemba, izivunguvungu ezinamandla zenzeka ngemimoya efinyelela ku-285 km / h. Kumele futhi kushiwo ukuthi ngalesi sikhathi ingcindezi yasemkhathini ingaphansi ngama-30% kunaleyo yolwandle. Lokhu kungenye yezinto eziguquguqukayo ezisemkhathini ezithinta nabo bonke abagibeli njengoba besondela engqungqutheleni.
Amamitha ambalwa ngezansi kwale ngqungquthela yindawo eyaziwa ngokuthi "indawo yokufa". Leli gama lidalwa ukuthi ukungabi bikho komoya-mpilo namazinga okushisa aphansi kakhulu kule ndawo kudale ukufa kwabaningi bezintaba.
Uma sihlaziya iphrofayili ye-troposphere ekuphakameni, siyabona ukuthi izinga lokushisa liyancipha njengoba siqhubekela phambili phezulu. Kuyafana nengcindezi yasemkhathini. Ngakho-ke, Lapho sifinyelela izingqimba eziphakeme kakhulu ze-Himalaya sinamazinga okushisa aphansi kakhulu nezingcindezi eziphansi kakhulu. Lezi zimo zemvelo zidala ukuthi iqhwa neqhwa linyuke. Ngakolunye uhlangothi, njengoba sehla phezulu, izinga lokushisa, ingcindezi iyanda futhi nenani leqhwa liyancipha. Yile ndlela esingabona ngayo kangcono idwala okwakhiwa ngalo uhla lwezintaba.
I-Everest yakhiwa izingqimba eziningana ezisongelwe zamatshe ase-sedimentary kanye ne-metamorphic ambozwe cishe unomphela yiqhwa neqhwa, ikakhulukazi ezingxenyeni eziphakeme. Lawa matshe asetshenziswe eminyakeni eminingi edlule. Ukukhuluma ngokwakhiwa kwalesi siqongo kusenza ukuthi sikhulume ngakho konke ukwakheka kwe-Himalaya. Sibuyele emuva ngesikhathi sePaleozoic sekwephuzile nasekuqaleni kweMesozoic, lapho izwekazi elikhulu elaziwa ngokuthi iPangea laliwukuphela kwesiqephu somhlaba kuyo yonke iplanethi.
Cishe eminyakeni eyizigidi eziyi-180 edlule ingaphezulu laleli zwekazi yaqala ukuhlukana ngenxa yokuhamba kwangaphakathi kweplanethi. Kwavela izindimbane zomhlaba ezinkulu ezabizwa ngeLaurasia neGondwana. Ngokwalo mbono, siyabona ukuthi izwekazi laseNdiya lahlukaniswa kanjani ne-Asia. Yaqala ukuthuthela enyakatho yaze yashayisana ne-Asia futhi yabangela ukuthi isifo sase-Indica sinciphe. Ukucwila kwesinye sezinambuzane ngaphansi kwesinye kwakubangelwa ukwehluka kwengcindezi nezinga lokushisa futhi ngenxa yalokho kwabangela ukuthi uqweqwe lomhlaba lusonge futhi lwenze uhla lwezintaba zaseHimalaya. Siyayazi leyo Everest Cishe ineminyaka eyizigidi ezingama-60 ubudala.
Akuyona nje into eheha abagibeli nabagibeli, kepha futhi iyisizinda sezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo. Njengoba engxenyeni ephezulu kakhulu ye-Everest kuncipha izinga lokushisa nengcindezi yasemkhathini, ukuhlala kwezinhlobo eziningi zezilwane nezitshalo kuvinjelwe. Yizilwane ezithile kuphela ezikwazi ukuhlala ngaphezulu kepha ngokulinganiselwa okukhulu. Isibonelo salokhu ngama-yak. Ziyizilwane ezinamaphaphu amakhulu awavumela ukuthi aphile ezindaweni ezingamamitha ayi-6.000 ukusuka phezulu. Ngakolunye uhlangothi, kunezinhlobo ezithile zezinyoni ezifana ne- umsele okhokhiswe obomvu ongandiza ufike kumamitha ayi-8.000 ukuphakama.
Ezinye izilwane ezingaphila kulezi zindawo ama-panda abomvu, amabhere amnyama ase-Himalaya, ingwe yeqhwa, izinhlobo ezithile zezicabucabu, amanqe kanye namanye ama-pika. Lezi zokugcina ziyobalekela ezintabeni ngezikhathi ezithile zonyaka.
Ngokuqondene nezimbali, azifani kangako kuze kube seqophelweni elithile kwamanye amadwala lapho sibona khona ubulembu, yize kusuka kumamitha angama-4876 ukuphakama, ungathola nje kuphela ubulembu nezitshalo ezakha amakhushini. Ngaphezulu kwamamitha ayi-5600 wokuphakama azikho izimila nhlobo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-Everest nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » Everest